စာလုံးအလင်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနံရံများ၊ mantels များ (သို့) အခမ်းအနားအတွင်းဧည့်ခံပွဲတစ်ခု၏ထိပ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည်။ (အလွယ်တကူဆွဲထားရန်ကျောဘက်တွင်သော့ပေါက်ပါရှိသည်)
၁။ နွေးထွေးသောအဖြူရောင် LED မီးများဖြင့်နွေးထွေး။ အချစ်ရေးကိုဖန်တီးပါ။ မင်းရဲ့မမေ့နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုမီးထွန်းလိုက်ပါ။
၂. နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအပြင်ဘက်၊ ကျောဘက်တွင် ON နှင့် OFF ခလုတ်တို့ပါ ၀ င်သည်၊ လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေသည်။
ထွက်ပေါက်မလိုအပ်ပါ၊ 2AAAbatteries များကိုအသုံးပြုသည် (သို့မဟုတ်ဓာတ်ခဲမပါ)
3. တာရှည်ခံ & စွမ်းအင်ချွေတာ & စီးပွားရေး ပလပ်စတစ်အပြင်အဆင်၊ ခိုင်ခံ့သော်လည်းအလွန်မလေး။
အမျိုးအစား: LED အလှဆင်မီးများ
ပါဝါအရင်းအမြစ်:2x AAA ဘက်ထရီ (မပါဝင်ပါ)
အမျိုးအစား-A မှ Z သို့အက္ခရာ၊ ဂဏန်း ၀ မှ ၉ အထိ၊ အနီရောင်နှလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည် LED Marquee Letter Lights များကိုသာရောင်းချသည်၊ အခြားအလှဆင်မှုများမပါဝင်ပါ၊ ၁-၂ စင်တီမီတာအတွင်းတိုင်းတာမှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
၁၀၀% အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ တစ်သက်တာအာမခံ၊ သင်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နှင့်မှမကျေနပ်ပါကအခမဲ့ပြန်ပို့ပါ (သို့) အပြည့်အ ၀ ပြန်အမ်းပေးပါ။
ရယ်စရာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကိုးကားချက်များ၊ အထူးအချိန်များနှင့်သမိုင်းမှတ်တိုင်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားများဖန်တီးပါ။
မကြီးလွန်း၊ မသေးလွန်းပါ။ လက်မတိုင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။
အနောက်ဘက်တွင် ON/ OFF ခလုတ်။
[လုံခြုံ။ စွမ်းအင်ချွေတာရန်] ဖက်ရှင် LED စာတန်းထိုးမီးလုံး၊ Long LED မီးလုံးရှည်၊ ရေရှည်အသုံးမပူပါ။ ချွန်ထက်သောအစိတ်အပိုင်းများမရှိ၊ ကလေးများအသုံးပြုရန်လည်းလုံခြုံသည်။
[အဆင်ပြေမှု] ကျွန်ုပ်တို့၏ထွန်းညှိထားသောမီးလုံးများသည်အလွန်စွယ်စုံ သုံး၍ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ Marquee နံပါတ်တစ်ခုစီသည်ကြိုးမဲ့စနစ်နှင့်ဘက်ထရီအသုံးပြုသည်။ SWITCH ကိုပိတ်ထားပါ၊ မီးခလုတ်ကိုဖွင့်/ပိတ်တစ်ခြမ်းသည်ဤ marquee letter sign ကိုသုံးရအဆင်ပြေစေသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကြီးမားသောကြောင့်လျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်သို့ပလပ်ထိုးရန်မလိုပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်အခမ်းအနားများသို့မဟုတ်နေရာများအတွက်မဆိုပြီးပြည့်စုံသောအလှဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
[ဖန်ဆင်းခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပါ။ ] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ & ❤အက္ခရာ ၂၈ လုံးနှင့် ၀-၉ ဂဏန်းအက္ခရာများ LED မီးလုံးများ၊ ဤအံ့ဘွယ်သော LED စာလုံးများဖြင့်မည်သည့်နာမည်၊ စကားလုံးများသို့မဟုတ်စကားစုကိုမဆိုပြပါ။ မင်းကိုချစ်တယ်၊ အိမ်၊ ငါ့ကိုလက်ထပ်မယ်၊ U & M စသဖြင့်မင်းစိတ်ကူးတွေကိုကစားပါ။
ယခင်: Translucent Film Light Box ဖြစ်သည်